Firefox 10.0 1eta XNUMX ရရှိနိုင် | Linux မှ
Firefox 10.0 ßeta 1 ရရှိနိုင်
မှတဆင့် Mozilla ဗားရှင်းရှိပြီးသားဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိသည် 10.0 beta ကို 1 de Mozilla Firefox ကို အရာ (အခြားသူများအကြား) အောက်ပါသတင်းပါဝင်သည်။
Back ခလုတ်ကိုနောက်တစ်ကြိမ်အသုံးပြုသည်အထိ Forward ခလုတ်ကိုဝှက်ထားပါသည်။
WebGL အတွက် Aliiis ဆန့်ကျင်ရေးအထောက်အပံ့။
Full Screen APIs များကသင့်အား web application တစ်ခုကိုမျက်နှာပြင်အပြည့်ဖွင့်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
CSS3 3D-Transforms အတွက်အထောက်အပံ့။
HTML5 element နှင့် CSS property ဖြစ်သည်။
CSS Style စစ်ဆေးရေးကိုထပ်ထည့်သည်။
IndexedDB API များ။
ကွဲပြားခြားနားသောတည်ငြိမ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို Fixed ။
ပိုပြီး သတင်းအချက်အလက်နှင့် downloads ထဲမှာ Mozilla ဖိုရမ်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Firefox 10.0 ßeta 1 ရရှိနိုင်
WTF? မနေ့ကမှပဲ Firefox 9> ကို install လုပ်ပါ။ :(
ငါရက်အနည်းငယ်အကြာအထိဗားရှင်း 4.0 xDDDD ရှိခဲ့ပါတယ်
ဤနှုန်းထားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ Firefox 20 မကြာမမြင့်တွင်ရှိလိမ့်မည်၊ နှစ်ပေါင်းများစွာ Firefox တည်ရှိမှုတွင် Firefox3သို့မဟုတ်4နှင့်တစ်နှစ်ခန့်အကြာ၌လမ်းလျှောက်နေသည်။ ပြီးသား9။
ပြိုင်ဆိုင်မှုအားဖြင့်အရှုံးမခံရန်၊ browser ဗားရှင်းသည်၎င်း၏အသုံးပြုသူများအတွက်အဘယ်ကြောင့်ဤမျှအရေးကြီးသည်ကိုသိရှိရန်ကျွန်ုပ်အတွက်ဆောင်ရွက်ချက်များသည်စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းသည်။ ဒါ့အပြင်သူတို့ကဘာမှမလုပ်ပဲတိုးချဲ့သူများကိုဗားရှင်းအပြောင်းအလဲများစွာနဲ့အလွဲလုပ်ပြီးဘာမှမလုပ်ဘဲလှူဒါန်းခြင်း မှလွဲ၍ မည်သည့်အရာကိုမဆိုအားသွင်းစရာမလိုပဲဘရောင်ဇာကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ကူညီပေးသည်။
Firefox 20 ရှိခြင်းဟာနည်းနည်းတော့ရုပ်ဆိုးသွားပါလိမ့်မယ်။ Browser ဗားရှင်းနံပါတ်ကိုသူတို့အခုလုပ်နေတာနဲ့ဆန့်ကျင်နေတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုမတွေ့နိုင်တာကိုသူတို့မအံ့သြခဲ့ပါဘူး။
လုံးဝသဘောတူသည် (အထူးသဖြင့်တိုးချဲ့သူများဖန်တီးသူများ၏ကိစ္စတွင်) သူတို့သည်၎င်းတို့သည် Firefox ကိုမည်သည့်နေရာသို့ခေါ်ဆောင်သွားသည်ကို (ဝန်ခံရမည်ဖြစ်သောကြောင့်၊ တိုးချဲ့ခြင်းမရှိဘဲ Firefox သည်လူမရှိသောပါတီနှင့်တူသည်) သူတို့သည်လူများဖြစ်သည်။ ၎င်းမှာ Firefox သည်သုံးစွဲသူများကိုဆက်လက်အသုံးပြုထားသည်။ အဓိကအားဖြင့် browser ၏ဆိုးရွားလှသောရာသီဥတုကြောင့်ဖြစ်သော (Firefox ၏ကြောက်မက်ဖွယ်ရာကိုရှောင်ရှားရန်မစဉ်းစားဘဲပထမကျောက်တံတားကိုချဲ့ထားသောတိုးချဲ့မှုများနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောကြောင့်) နှင့်အထက်သို့ သူတို့အားလုံးသည်အကျိုးမဲ့စွာမကြိုးပမ်းဘဲအလုပ်လုပ်နေကြသောလူများဖြစ်ကြပြီး၎င်းတို့သည်ဘာမျှပြန်ပေးစရာမလိုဘဲထိုနာမ၌နေထိုင်ခြင်းအတွက်နှစ်စဉ်သန်း ၃၀၀ ရရှိသည့်အတိုင်းယင်းကိုလှောင်ပြောင်ကြသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်ကျနော့်အမြင်တွင်သူတို့က“ စော်ကား” ခြင်းခံရသည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကသူတို့ကိုနံပါတ်ပြောင်းလိုက်တာနဲ့သူတို့ကိုမျက်နှာသာပေးသလိုဆက်ဆံတာပေါ့။ များစွာသောသူတို့သည် upd မွမ်းမံခြင်းမရှိဘဲတစ်နှစ်အထိအချိန်နှင့်ကုန်လွန်ကြသည်။
အနည်းဆုံးတော့ firefox versionitis နှင့်အဆက်မပြတ်ရပ်တန့်သွားပြီး၎င်းသည်လအနည်းငယ်မျှရပ်တန့်သွားသည်ကိုကျွန်ုပ်ရိုးရိုးသားသားမသေစေလိုသောစီမံကိန်းတစ်ခု (extension မဟုတ်ပါ) ရှိသည်။
Bash: အခြေအနေများ (ရှိလျှင် - အခြား)